Booliiska K/Galbeed: Annagaa Damaanad Qaadeyna Amniga Goobaha Doorashooyinka – Goobjoog News
Taliska Booliiska maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in iyagu ay damaanad qaadayaan amniga guud ee goobha doorashooyinka ka dhacayaan ee maamulkaasi iyo sidoo kale musharraxiinta ku sugan Baydhabo.
Taliyaha Booliiska K/galbeed Maxamed Isaaq oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in dedaal badan ay ku bixinayaan sidii ay qaab nabadeed ugu dhici lahayd doorashooyinka la filayo iney ka dhacaan Baydhabo.
Waxa uu tilmaamay in shaqada ay ciidanka Booliiska hayeen lasii xoojiyey islamarkaana haatan ay u taagan yihiin xaqiijinta amniga dorashooyinka.
“Diyaar baan u nahay inaan sugno amniga guud ee musharraxiinta Koonfur Galbeed, sidoo kale waxaan sugeynaa amniga goobaha doorashooyinka annaga oo ka feejigan wax walbo, annaga ayaa damaanad qaadeyna amniga guug ee goobaha doorashooyinka” ayuu yiri Taliyaha.
Taliye Isaaq ayaa kula dardaarmey shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwa Baydhabo iney u istaagaan la shaqeynta ciidamada amniga.
Magaalooyin badan oo dalka ah waxaa looga diyaargaroobayaan doorashooyinka aqalka hoose, iyadoo amniga uu yahay mid aad loo adkeeyey.
Ciidamada Itoobiya Oo Howlgallo Ka Wado Gobolka Hiiraan
Deegaanadii dhawaan ay lagala wareegay Al-shabaab ee Jubada Hoose oo xaalad adag laga soo sheegayo (Dhageyso)
Soomaali Iyo Oromo Ku Dagaallamay Gobolka Soomaali Galbeed
cialis 20 mg sell cialis usa buy cialis on liuner [url=http:...
[url=https://cialisoap.com/]discount cialis online[/url] cia...
zithromax generic cost: where can i buy zithromax capsules -...
australianviagraonline original viagra viagra in canada [url...
black cialis sale soft cialis canadian pharmacy cialis no pr...